Huawei Mate 20 Lite: toetra, taratasy ary vidiny | Androidsis
Ny Huawei Mate 20 Lite dia ofisialy: efijery 6.3,, Kirin 710, bateria 3.750 mAh ary maro hafa
Andro vitsy lasa izay, ny Huawei Mate 20 Lite tafaporitsaka ao a fivarotana -tserasera poloney miampy ny masontsivana teknika, sary ary ny vidiny. Na dia tsy nivadika ho ofisialy aza izany, satria tsy nanolotra azy tamin'ny fomba ofisialy i Huawei, dia mitazona ireo toetra saika nitovizany ihany ilay telefaona.
Ny fitaovana vaovao an'ny orinasa dia tonga eo afovoany midadasika, satria ampiasain'ny processeur Kirin 710. Ho fanampin'izany, mampiditra toetra marobe manamafy azy ho terminal mahery izy io, na dia tsy hita ho toy ny avo lenta lafo vidy, satria vao nambara tamin'ny vidiny mora sy misy endri-javatra ambany noho ireo hoentin'ireo zokiny roa lahy, ny Mate 20 sy Mate 20 Pro. Mahalalà azy!
Ny kit dia miaraka a Efijery diagonaly 6.3 santimetatra miaraka amina FullHD + vahaolana 2.340 x 1.080 teboka. Izy io dia napetraka amin'ny tahan'ny lafiny 19.5: 9 ary mahatratra 81% amin'ny habaka eo anoloana rehetra. Ho fanampin'izay, manana ny lohany amin'ny endriny izy.
Miorina amin'ny fahefana, ny Mate 20 Lite dia manana SoC Kirin 710, ilay chipset valo-core izay mahazaka hafainganam-pandeha hatramin'ny 2.2 GHz. Izy io koa dia manana kapila RAM 4 GB ary misy toerana fitahirizana anatiny 64 GB. Mandritra izany fotoana izany dia miasa izany rehetra izany noho ny batterie 3.750 mAh miaraka amin'ny fanohanan'ny famandrihana haingana 18 watt.
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ilay mpikambana vaovao ao amin'ny katalaogin'ilay marika mihazakazaka Android 8.1 Oreo miaraka amin'ny EMUI 8.2. Ho fanampin'izany, manana sensor avo roa heny amin'ny 20 sy 2MP izy, miaraka amina f / 1.8 aperture amin'ny roa, ny fifantohana PDAF, ny tombony AI ary ny flash LED. Eo aloha, ny finday dia manana fakantsary roa misy 24 sy 2MP (f / 2.0) miaraka amin'i AI sy Qmoji 3D.
Etsy ankilany, manana mpamaky ny rantsan-tànana any aoriana izy, eo ambanin'ny fakan-tsary, ary manana teknolojia mamoha amin'ny alàlan'ny fitiliana ny tarehy misaotra ny teknolojia famantaran-tarehy nampiharina.
1 Takelaka data Huawei Mate 20 Lite
Takelaka data Huawei Mate 20 Lite
SCREEN 6.3 "miaraka amin'ny famaha FullHD + 2.340 x 1.080p (19.5: 9) / 409 dpi
PROCESSOR Kirin 710 amin'ny 2.2 GHz max.
SPORAGE SPACE 64 GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny microSD ka hatramin'ny 256 GB
CHAMBERS Aoriana: 20 sy 2MP (f / 1.8) miaraka amin'ny PDAF / Frontal: 24 sy 2MP (f / 2.0) miaraka amin'ny AI sy 3D Qmoji
BATERA 3.750 mAh miaraka amina fiampangana haingana
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 8.1 Oreo ambanin'ny EMUI 8.2
CONNECTIVITY 4G VoLTE. Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac tarika roa (2.4GHz / 5GHz). Bluetooth 5 LE. GPS + GLONASS. USB Type-C. NFC
ASA hafa Mpamaky rantsantanana aoriana. Fanekena endrika amin'ny famohana.
DIMENSION SY lanjan'ny 158.3 x 75.3 x 7.6 mm / 172 grama
Ny orinasa Aziatika dia tsy nanambara vaovao mazava momba ny vidiny na ny fisian'ny Mate 20 Lite eny an-tsena. Mbola misy loharanom-baovao samihafa milaza izany ho tonga any UK amin'ny volana oktobra ary mitentina £ 379 ny vidiny, izay fintinina eo amin'ny 429 euro eo ho eo hanovana. Izy io dia tonga amin'ny loko mainty, safira manga ary volamena platinum.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Huawei Mate 20 Lite dia ofisialy: efijery 6.3,, Kirin 710, bateria 3.750 mAh ary maro hafa
Famerenana ny kitapom-batsy Mbuynow, seranan-tsambo USB ary headphone